Umsuka wegama elithi Africa - Afrikhepri Fondation
Llapho igama elithi "i-Afrika" lingakabikho, sakhuluma, ukubhekisa ezifundeni zalesi sifunda, zeKathiopa, izwe laseTopiya, izwe le "Cham", izwe le "Coush", izwe le "Sheba ", D'Alkebulan ... Ngokusho kwesazi-mlando esidumile u-Ibn Khaldoun, la mazwe athola igama elithi" IFRIQIYA "(e-Afrika) ngemuva kokuhlasela kwenkosi eyodwa yama-Arab yaseYemen, eyabizwa ngegama elithi" Ifriotsi bin Qais bin Saifi ", Le nkosi izolanda amazwe aseNyakatho (Magreb, njll.), Futhi kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke izothwala igama elihlobene naye, okungukuthi" Ifriqya "(i-Afrika). Ngaphezu kwalokho, umhloli wamazwe odumile uLeon the African, uthi encwadini yakhe i-cosmographia ye-africa ukuthi igama elithi Afrika lanikezwa nguMalek-Afriki, inkosi uSabéen, lapho ehlasela enyakatho ne-Afrika (Maghreb yamanje).
- Abantu baseYurophu basibiza ngegama lama-Afrika avela emlonyeni we-Ifriqiya, igama lesizwe saseBergber esifakwe ngesikhathi saseRoma, phakathi kweTunisia ne-Eastern Algeria.
- Ama-Arabhu asichaza ngegama laseSudan elisho abamnyama, nezwekazi lethu nge-Al Kabulan elisho Yena owazi ukuthi ungamukelwa kanjani.
- AmaGreki asitshela ngamazwi aseTopiya asho ukuthi uBurned Face, futhi igama elithi Libya lisho izwekazi lethu (uHerodotus, Umlando II, 22 noMlando IV 42).
igama Africa kwakuzovela eNtshonalanga ngabaRoma, abasebenzisa leli gama Afrika terra - "Izwe lase-Afri" (iningi, noma "Afer" kuyingxenye eyodwa) - ukuchaza iNyakatho yezwekazi, njengezifundazwe zase-Afrika neCentral Carthage, ehambisana neTunisia yamanje.
I-Afri yayiyisizwe esasihlala eNyakatho Afrika esifundeni saseCarthage. Umsuka Afer ingaxhunyaniswa nolimi kude AmaFenike, okusho ukuthi "uthuli". Kodwa inkolelo ye-1981 ithi lokhu kuzothumela kusuka egameni elithi Berber ifri okusho "umhume", ngokubhekisela ku-troglodytes (abahlala emaphandleni).
- Kepha amaJuda, bayiqamba kithi izwi Koushim futhi izwekazi lethu ngegama elithi Kush, okuthiwa BaKouSou babantu bethu Nzadi (Jeremiya 13: 23 noZefaniya 3: 10).
Kodwa-ke, isahluko se-10 sencwadi kaGenesise sicaphuna amazwekazi amathathu awaziwa esikhathini esidala, sitshela ukuthi igama elidala lezwekazi lethu lalinguKaM, elinciphisa i-KaMa.
Umsuka wegama elithi "KaMa" utholakala kubantu abaningi e-Central Africa, eNtshonalanga Afrika.
Lezimpande ezazuzwa okhokho bethu zitholakala ngezilimi ezilandelayo:
- I-KaMa isho Black ngoCoptic,
- IKaMa isho ukuthi ibumnyama eMbochi,
- I-KaMi isho ukuthi i-Burned in Bambara, iKéMi isho ukushiswa eMandjakou,
- I-KeM isho ukushiswa ngesi-Wolof,
- UKim usho ukushiswa eMossi,
- KeMpou elisho Black in Vai,
- I-KéMatou okusho ngokushiswa ngokuphelele eMandjakou iseduze neKaMtou yaseGibhithe.
Igama waseGibhithe Kama imidwebo emelelwa ucezu evutha ukhuni (namalahle) lisuselwa Kala olukhulu incazelo yamalahle futhi kwezinye izilimi zethu, njenge Kongo, le Teke, le Zigoula ka Mbati njll
Kodwa ingabe igama elithi KaMa (KMT) elivela kuleli zwekazi?
Yebo, ngoba selokhu kwavela umbhalo we-hieroglyphic (3400 BC), amaGibhithe asendulo azikhethela ngegama elithi KaMtou elisho ukuthi abaMnyama, ngoba ayekhona. Ngaphezu kwalokho, basebenzise igama elithi KaMi noma KeMet (KMT) elisho ukuthi Imnyama, hhayi nje kuphela ukuqamba umhlaba wabo, kodwa futhi nokwandisa izwekazi lethu. ISudan isho "umhlaba wabamnyama" kuthi iTopiya isho "ubuso obushisiwe".
Igama elithi KaM libuye livele embhalweni waseKhanani owabhalwa ngekhulu le-10 BC. J. C, futhi sichaza izwekazi lethu (iSele laseParaiba, eBrazil). [Wpdiscuz-feedback id = "h2bbob98az" question = "Ucabangani?" kuvuliwe = ”1 ″] [/ wpdiscuz-feedback]
Singama-KAMITES futhi izwekazi lethu libizwa ngokuthi yi-KAMA (noma i-KAMITA)
4 okusha kusuka ku-15,20 €
I-4 isetshenzisiwe kusuka ku-13,89 €
kusukela ngoSepthemba 18, 2020 2:16